AVAST ကို INSTALL မဟုတ် - AVAST - 2019
Avast antivirus ကို၏ installation နှင့်အတူပြဿနာများ: ဖြေရှင်းချက်များအတွက်ရှာဖွေရေး
အခုတော့အများအပြားအသုံးပြုသူများသည်ဂိမ်းများကိုအသံချက်တင်ကို အသုံးပြု. သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကနေတစ်ဆင့်အခြားလူများနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ဤသည်တစ်ခုတည်း device ကိုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်, ဒါပေမယ့်လည်းနားကြပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနိုင်ပါတယ်မသာသောမိုက်ကရိုဖုန်း, လိုအပ်သည်။ ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့က Windows7operating system ကိုအတွက်နားကြပ်ပေါ်မိုက်ခရိုဖုန်းကိုစမ်းသပ်ဖို့နည်းလမ်းများစွာဆှေးနှေးပါမညျ။
Windows တွင်နားကြပ်ပေါ်မိုက်ခရိုဖုန်းကို Check 7
ပထမဦးစွာသင့်ကွန်ပျူတာမှနားကြပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့လိုပါတယ်။ အများစုမှာမော်ဒယ်ဂျက် 3.5, သီးခြားစီမိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်နားကြပ်အဘို့, အသံကဒ်ပေါ်တွင်သင့်လျော်သော connectors သူတို့ကိုချိတ်ဆက်နှစ်ခုရလဒျကိုအသုံးပြုပါ။ လျော့နည်းလေ့အသီးသီးတဦးတည်းကို USB-output ကိုအသုံးပြုပါကမဆိုရရှိနိုင်ပါက USB-connector ကိုချိတ်ဆက်။
အသံမမကြာခဏမှန်ကန်စွာထိတွေ့ parameters များကိုဖြင့်လိုက်ပါသွားဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကစမ်းသပ်ခြင်း, မိုက်ကရိုဖုန်းစာတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ခြင်းမပြုမီ။ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းထွက်သယ်ဆောင်ရန်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, သာနည်းလမ်းများနှင့်တစ်ဦးအနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများ၏တဦးတည်းသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ပိုများသော: တစ်လက်တော့ပေါ်မှမိုက်ခရိုဖုန်းကို set up လုပ်နည်း
သင်နားကြပ်ပေါ်မိုက်ခရိုဖုန်းကိုစစ်ဆေးသွားနိုင်ပါတယ် preset ကိုဆက်သွယ်ထားသောနှင့်ပြီးတဲ့အခါ, အနည်းငယ်ရိုးရှင်းတဲ့နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. ထွက်ယူသွားတတ်၏။
Method ကို 1: Skype ကို
လူအတော်များများဟာအသုံးပြုသူများအစီအစဉ်တွင်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက် device ကို configure လုပ်ဖို့ပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည်ဒါဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှ Skype ကိုသုံးပါ။ သငျသညျအစဉ်အမြဲဆက်သွယ်စာရင်းထဲတွင်ပစ္စုပ္ပန်များမှာ ပဲ့တင်သံ / အသံစမ်းသပ်ခြင်းန်ဆောင်မှုအဘယ်မှာရှိနှင့်မိုက်ခရိုဖုန်းများ၏အရည်အသွေးအတည်ပြုရန်ခေါ်ခြင်း။ ကြေညာချက်စစ်ဆေးနေစတင်ရန်၎င်းတို့၏ကြေညာချက်အပြီးညွှန်ကြားချက်ကိုကြေညာပါလိမ့်မယ်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက: Skype ကိုဆော့ဖျဝဲထဲတွင်မိုက်ခရိုဖုန်းကို Check
စိစစ်အတည်ပြုပြီးနောက်သင်စကားပြောဆိုမှုတိုက်ရိုက်သွားနိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ် system ကို tools များမှတဆင့်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက် Skype ကို setting များကိုတဆင့်ချည်းရွေးချယ်စရာထားကြ၏။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Skype ကိုအတွက်မိုက်ကရိုဖုန်းတက်ချိန်ညှိခြင်း
နည်းလမ်း 2: အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကို
အင်တာနက်ကိုတွင်သင်သည်မိုက်ခရိုဖုန်းကနေသံကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ကနားမထောငျ, ဒါမှမဟုတ်အမှန်တကယ်အချိန်အတွက်မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြခွင့်ပြုများစွာကိုအခမဲ့အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများရှိပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် site ကိုမှသွားနှင့် click နှိပ်ပြီးမှသာလိုအပ်ပါတယ် "စမ်းသပ်မိုက္ကရိုဖုန်း"ပြီးတော့ချက်ချင်းစပီသို့မဟုတ်နားကြပ်ဖို့ကိရိယာမှအသံမှတ်တမ်းတင်သို့မဟုတ်ဂီယာကိုစတင်ပါ။
မိုက်ခရိုဖုန်းကိုစမ်းသပ်ဖို့အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆောင်းပါးထဲမှာနိုင်ပါတယ်။
Method ကို 3: မိုက်ခရိုဖုန်းကနေအသံဖမ်းအသံ Programs ကို
Windows7မှာ built-in utility ကိုပစ္စုပ္ပန် "ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်"သို့သော်ထိုသို့မ settings ကိုသို့မဟုတ်နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ထိုကွောငျ့, ဤအစီအစဉ်သံကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေမဟုတ်ပါဘူး။
ဤကိစ္စတွင်အတွက်အထူးအစီအစဉ်များကိုတဦးတည်ထောင်ရန်နှင့်စမ်းသပ်မှုများလုပ်ဆောင် သာ. ကောင်း၏။ ရဲ့အခမဲ့ပေး Audio Recorder ၏သာဓကအားဖြင့်တစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ရှုကြကုန်အံ့:
program ကို run ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်သိမ်းဆည်းဖို့ရာအတွက်ဖိုင် format ကိုရွေးပါ။ စုစုပေါင်းသုံးခုရှိပါတယ်။
tab ကို "ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်" ပုံစံ, ချန်နယ်များအရေအတွက်နှင့်အနာဂတ်စံချိန်၏ကြိမ်နှုန်း၏လိုအပ်သော parameters များကိုသတ်မှတ်မည်။
အဆိုပါ tab ကိုသွားပြီး "စက်ပစ္စည်း"သောစက်ကိရိယာနှင့်ရုပ်သံလိုင်းချိန်ခွင်လျှာ၏ခြုံငုံအသံအတိုးအကျယ်ညှိ။ ဤတွင်ကျနော်တို့စနစ် setting များကို button ကိုပဌနာကိုတင်ပြ။
ဒါဟာသင်မိုက်ခရိုဖုန်းကျော်ကစကားပြောနှင့်သူမ၏ရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်စံချိန်တင် button ကိုနှိပ်မှသာဖြစ်နေဆဲပင်။ ဖိုင်အလိုအလျှောက်သိမ်းဆည်းနှင့် tab ကိုမှကြည့်ရှုခြင်းနှင့်နားထောင်ခြင်းများအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် "File".
Program ကိုသငျသညျကိုက်ညီမပါဘူးဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့နားကြပ်အပေါ်တစ်ဦးမိုက်ကရိုဖုန်းကနေအရာမှတဆင့်အသံနဲ့အခြားအလားတူဆော့ဖ်ဝဲ, စာရင်းတစ်ခုရှာတွေ့ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
devices များနှင့်အတူ built-in Windows7ကို features တွေချိန်ညှိဒါပေမယ့်လည်း check လုပ်ထားသာ။ ကလွယ်ကူအတည်ပြုရန်, သင်သာအနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများလိုအပ်:
အဆိုပါ tab ကိုသွားပြီး "မှတ်တမ်း", အတက်ကြွကိရိယာပေါ်တွင် Edit ကိုခလုတ် mouse ကိုနှိပ်ပါ, select လုပ်ပါ "Properties ကို".
tab ကို "Listen" option ကိုသက်ဝင်စေ "ဒီကိရိယာကိုနားထောင်ပါ" နှင့်သင့်ကိုရှေးခယျြ setting များကိုလျှောက်ထားရန်မမေ့မလြော့ပါ။ အခုတော့မိုက်ခရိုဖုန်းထံမှအသံကြောင့်နားထောင်ရန်နှင့်သေချာအသံအရည်အသွေးကိုဖြစ်စေမည်ဟုချိတ်ဆက်ပီသို့မဟုတ်နားကြပ်ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်။
volume ကိုသငျသညျကိုက်ညီမပါဘူး, သို့မဟုတ်သင်ဆူညံသံကိုနားထောငျနိုငျလြှငျ, ထို့နောက်လာမည့် tab ကိုသွားပါ "Levels နဲ့" နှင့် parameter သည်သတ်မှတ်ထား "မိုက်ခရိုဖုန်း" လိုအပ်သောအဆင့်အထိ။ အဘိုး "မိုက်ကရိုဖုန်း Boost" သိပ်ဆူညံသံပေါ်လာဖို့စတင်များနှင့်အသံပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်ဖြစ်လာအတိုင်း, 20 ကျော် dB ထားရန်အကြံပြုမဟုတ်ပါဘူး။
ဤအရန်ပုံငွေများအဆိုပါချိတ်ဆက်ကိရိယာ၏စိစစ်အတည်ပြုထွက်သယ်ဖို့လုံလောက်တဲ့မဟုတ်ဆိုပါကအပိုဆောင်းဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြု. သည်အခြားနည်းလမ်းများသုံးစွဲဖို့အကြံပြုသည်။
ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့ကသူတို့ကိုတစ်ခုချင်းစီအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်တိကျတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုသို့မဟုတ်အသိပညာမလိုအပ်ပါဘူး Windows7အတွက်နားကြပ်ပေါ်မိုက်ခရိုဖုန်းကိုစမ်းသပ်ဖို့လေးခုအခြေခံနည်းလမ်းတွေမှာကြည့်ရှုကြ၏။ ကိုယ့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုထုတ်ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်လိုက်နာပါ။ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသင်ကိုက်ညီသောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဗီဒီယို Watch: Avast Antivirus Premier full (သြဂုတ်လ 2019).
https://termotools.com my.termotools.com © Avast 2019